လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် မှစ. နိုင်ငံခြားသား✰✰✰✰✰ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်
ကလေးတွေအဘို့အဒူဘိုင်း - ဒူဘိုင်းအတွက် Living အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်း
မွန်ဘိုင်းရှိအလုပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အိန္ဒိယတွင်ငှားရမ်းခြင်း!
ဇူလိုင်လ 30, 2018
ဂျော့ဘ်အတွက် Dubai for Foreigners all over the world. Stop အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့။ စော်ဘွားအတွက်အသစ်တခုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရရှိရန်ကူညီပေးခြင်း။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပမှာအသစ်အလုပျသမားမြားအဘို့အ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်အတွက်ဖြစ်လာသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုယူပြီးနေကြတယ် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျိန်းသေကျွမ်းကျင်သူများကလှုံ့ဆျော။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်အကိုင်ရရန်။ ကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ရန်စတင်ကတည်းက။ နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများတစ် upload တင်လို့ရပါတယ် အမ်းမရိတ်၌အကြှနျုပျတို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ CV ကို။ ထိုအထဲကအညွှန်ဖို့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံများမှအလုပ်အကိုင်ရတဲ့သူတို့ကိုအများကြီး။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစကားပြော။ ဖြစ် နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အဓိကဦးတည်ရာ။ ဒီအာရပ်နိုင်ငံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကြောင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့။ စိတ်၌ဤအတူဤဦးတည်ရာအိန္ဒိယကောင်းမွန်သည်နှင့် ပါကစ္စတန်အမှုဆောင်အရာရှိ။ ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီ၏အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်။ အဓိကဖြစ်လာ ယူအေအီးအတွက်စီးပွားရေးစင်တာ။ ယင်း၏ရှယ်ယာအိုမန်နှင့်အတူနယ်စပ်နှင့်ကြောင့်, ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ထိုသူတို့ကအကောင်းတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဟုအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ အထူးသဖြင့်ရပ်ကွက်၌တည်၏။ ထို့အပြင်အရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား Arabic ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်စတင်ရန်ကောင်းသော။ လာမယ့်ခြေလှမ်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ.
သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာ, နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးဟာစော်ဘွားအတွက်ဆင်းသက်လိမ့်မယ်ခင်မှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းစကားပြော။ အတော်ကြာလမ်းညွှန်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ ကူညီဖို့သူတို့ကိုဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေဘို့ကိုစတင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ရှာဖွေတာအခွင့်အလမ်းများ။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အတော်လေးခက်ခဲချုပ်ရိုး။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောဆိုခြင်း, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပြီးသားအများအပြားကောင်းသောလမ်းပြတင်လိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့်အသစ်အများအတွက် ပြည်ပမှာပြည်တော်ပြန်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုထပ်အနည်းငယ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရမည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်တစ်ဦး စံလူတစ်ဦးလွန်းမျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။ အများဆုံး replays 2.0% အထိ 3.0% တက်န်းကျင်နှင့်သေချာအလွန်နိမ့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းအဘို့အ Are ။ အများစုကိစ္စများတွင်လူတွေကိုအဘယ်သူသည် သငျသညျပြန်တုံ့ပြန်မည်။ ဒီတစ်ခါလည်းမပေးသငျသညျမြျှောလငျ့ထားသည့်လူတစ်ဦး။ ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သတိထားရ အဘယ်သူကိုသင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစာတစ်စောင်နှင့် CV ကိုစလှေတျတျော။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လိမ်လည်မှုကုမ္ပဏီတွေအများကြီးလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကြိုးစားကြရန်သင့်အားအားပေး။ သင့်ရဲ့ Register အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ထမ်းတွင်ကျယ်စွာအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူရှာဖွေစုဆောင်းတစ်-shot ပါပေးစကားပြောခြင်း။ သင်သည်ယခုတက်လာလတံ့သောအရာကိုငါသိ၏ဘယ်တော့မှကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်မှာရှိ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဆင်းသက်စေခြင်းငှါ။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းတဦးတည်းစကားပြောဆက်သွယ်မှုများကိုရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစေနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့အသစ်တခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းသော Are နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဒူဘိုင်းအသစ်အလုပ်အကိုင်နှင့်ဂျော့ဘ်များအတွက် နေဆဲပွင့်လင်းကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွောငွာအလုပ်သစ်ကိုသင်တို့အားရှုထောင့်စေကထပ်ပြောသည်။
တစ်ဦး foreginer အဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုထွက်ရှာမည်
ပင်လယ်ကွေ့ Talent အကြောင်း: ပင်လယ်ကွေ့မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်များစာရေးနှင့်အတူပဲရှိတယ်။ နေ့တိုင်း updated ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအဘို့နေရာလွတ်။ နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ကာတာနိုင်ငံအဖြစ်အဘူဒါဘီအတွက်ပေးထားပါတယ်။ လူတွေအများအပြားဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်ကိုတွေ့ ဒီ website တွင်နိုင်ငံခြားသားများသည်။
Bayt အကြောင်း: အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ No.1 ကုမ္ပဏီ။ မြင့်မားနိုင်ငံခြားသားများအဘို့အ rated။ ထိုအထိပ်အလုပ်အကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတဦး။ လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အိန္ဒိယကျော်ပြည်သူ့အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ သူတို့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိမှ CV ကိုပေးပို့ခြင်း.
Edarabia အကြောင်း ဒါကကုမ္ပဏီအမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အဓိကပစ်မှတ်ကလူအဖြစ်နိုင်ငံခြားသားများကိုပညာပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီထိပ်တန်းအဆင့်က Google အတွက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အချို့အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှိခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အနည်းငယ်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေးပါသည်.
Dubizle အကြောင်း ဦးဆောင်ကျွောငွာက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ညအလုပ်ရှာဖွေဘို့မိမိတို့ယူအေအီးအပိုင်းကို အသုံးပြု. ob ရှာဖွေနေသူ ဗီဇာအတူ။ ကုမ္ပဏီ 2005 အတွက်စစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ပါ။ ထိုအချိန်မှစ. dubizzle.com အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါ၏နံပါတ် အလုပ်သစ် posted ထားပြီး။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လျှို့ဝှက်ပလက်ဖောင်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အလုပ်ရှင်များအဘို့သေချာသည်။
Monster ပင်လယ်ကွေ့အကြောင်း: အနဂါးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်မှာ။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့လို့ပဲ။ ပြီးတော့ကတည်းကနဂါးအဆင့်မြင့်ရှိခြင်း။ ထိုအတော်တော်များများ သူတို့နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ကလူ.
Glassdoor အကြောင်း: ကုမ္ပဏီ, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အခွင့်အလမ်းများအားမရစတင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီဘို့။ ပြီးတော့ကတည်းကကုမ္ပဏီများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခံယူနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အင်တာဗျူးများအားမရ။ ထိုမှတပါး, အလုပ်ရှာဖွေသူများက MBA ပညာရေးနှင့်အတူအလုပျအတှကျလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အလုပ်ရှာဖွေရေးဂျက်အကြောင်း Careerjet ထိပ်တန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူများတို့သည်အများစုယူအေအီးအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်စနစ် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့၏ဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးပိုလွယ်စေသည်။ နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာသည်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးဂျက်က်ဘ်ဆိုက်စတင်လိုက်တာနဲ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဒူဘိုင်း Careers အကြောင်း ဒူဘိုင်း Careers အလုပ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အရင်းအမြစ်အလုပ်ရှာဖွေသူ၏ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကစမတ်ဒူဘိုင်းအစိုးရတည်ထောင်နေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကမြင့်မားတဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိခြင်းနေကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီပေါ်တယ်ကျိန်းသေယူအေအီးအတွက်လမ်းဖွင့်ရွှေ့မည်။
ရိဒ်အကြောင်း: ဒီအကြီးမားဆုံးဗြိတိန်အလုပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယူအေအီးများအတွက်အလုပ်တင်ခြင်းရှိပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, လူများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ GBP အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်ဖို့တကယ့်ထိုက်သည်။
အကြောင်းအမှန်စင်စစ် သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် No.1 အလုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ထိပ်တန်း3အတွက်အဆင့်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ extensionally ပေါက်နေသည်။ 200 အတွက်သန်း 2018 ကျော်ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များနှင့်အတူ။ နှင့်လစဉ်လတိုင်းအသစ်တခုနိမိတ်လက္ခဏာကို-ups ရှိခြင်း။
Naukri အကြောင်းဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီအလုပ် site ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့သိရသည်။ Naukri လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်စုဆောင်းထားပြီးလို့ပဲ။ ဥပမာ, အိန္ဒိယ, ယူအေအီးနှင့်ကာတာနိုင်ငံအတွက် ဤ site ပြည်ပမှာအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်အတင်အပြည့်အဝ chock ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုကျော်ကမ်းလှမ်းမှု updated ။
Laimoon အကြောင်း: ဒီအလုပ် site ကိုဒါမဟုတျပါဘူး ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လူကြိုက်များ။ ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အဖွင့်စုဆောင်းဤ website ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ကိုလည်းကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအဘို့တင်ထားပါတယ်။
အများကြီးရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ။ လက်စွဲအလုပ်အထိအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးမှ။ နိမ့်အနေအထားမှာစတင်ခြင်းတစ်ခု option ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးဇာတိ Arabic အဘိဓါန်ပီဖြစ်ကြောင်းသာပါ။ သငျသညျအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ မပါဘဲ ဒူဘိုင်းတွင်အာရဗီဘာသာစကား။ အလုပ်အကိုင်အဘို့အနိမ့်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ထိပ်မှာဆိုဒ်များအားလုံး။ ကျိန်းသေအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ ထိုမှတပါး, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးရှိ အလုပ်သစ်ရွေးချယ်မှုအကြီးအကျယ်ငွေပမာဏ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူလူတွေအများကြီးကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပို့စ်တင်နေကြသည်။ အသစ်အလုပ်ရှာဖွေသူများနေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာစီမံနိုင်သည်။ ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်က်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီကတဆင့်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ဒူဘိုင်းအများအပြားသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြီးထွားလာသည်။ ထိုအခါအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအမ်းမရိတ်အတွက်အဓိကဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာကကြီးထွားလာစတင်ပါ။ ထို့နောက်နိုင်ငံခြားသားများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလှသောဖွင့်လှစ်ဖြစ်လာသည်။ ပြည်ပမှာကျိန်းသေအသစ်အလုပျသမားမြား။ ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာတဝိုက်အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများ။ အသစ်တစ်ခုကိုအိမ်မှာရှိနိုင်ပါသည် နိုင်ငံခြားသားများအဘို့.
နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဒူဘိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို are they good?
အဆိုပါစော်ဘွားမွကွေီးပျေါမှာကိုအကောင်းဆုံးနေရာများတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးဥပဒေရေးရာစနစ်ကတချို့ခက်ခဲအပေးအယူအပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှီးပညတ်တရား၏တစ်ဦး Hard-line ကိုအနက်ဖွင်။ နှင့်မျှမကိစ္စဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါကနောက်တော်သို့လိုက်ရပါမည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော ဥပမာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်သားများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏအလုပ်များအတွက်အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်ဆင်းသက်။ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်၎င်းတို့၏ဘဝစတင်ခြင်း။ ထိုအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြပါဘူး။ ပြစ်မှုများများအတွက်ထောင်ဒဏ်ဒီတော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအမှု၌, မြေယာ။ ယူအေအီးဟာအနောက်တိုင်းပညာပေးဖို့ကြိုးစားနေအဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ပြုရန်နှင့် ယူအေအီးအတွက်မပွု။ ဒါကကျိန်းသေသူတို့ကိုကူညီခြင်းနှင့် သူတို့ကိုပင်တဦးတည်းရာဇဝတ်မှုစေမယ်လို့မရ.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ရှိမကြာသေးခင်ကဥပမာရှိခဲ့သည် ဒူဘိုင်းမြို့။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ဘရိတ်ပညတ္တိကျမ်းပါ။ နှင့်ရှေ့နေများအားဖြင့်တစ်လျှောက်တွင်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ ယူအေအီး ပညတ်တရားကိုလူတိုငျးအတှကျတင်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလူထုအတွက်လက်အားကိုင်ထားပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမေတ္တာများအတွက် Facebook ပေါ်မှာဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပို့စ်တင်။ ထို့ပြင်သောက်သုံးရေအရက် လိုင်စင်မရှိဘဲတင်းကြပ်စွာအများပြည်သူအတွက်တားမြစ်သည်။ ကြော်ငြာမကောင်းတဲ့သတင်းအချို့ကိုဥပမာ, (တဦးတည်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ထက်အခြား) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းမျှဝေ။
ထို့အပြင်ဒူဘိုင်းအာဏာပိုင်များအချို့ကိစ္စများတွင်အတော်လေးမမျှတဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရ။ အမြဲတမ်းမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များများအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှာဖွေပါ။ အဲဒါကိုမှကြွလာသောအခါဘရိတ် Sharjah ဥပဒေခွင့်ပြုဘယ်တော့မှမ နိုင်ငံခြားသားများမှမကောင်းတဲ့အပြုအမူ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, နိုင်ငံတကာလူများအတွက်အနည်းငယ်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီဟိုတယ်များ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးလိုင်စင်စုံတွဲများမမေးကြဘူး။
သာမန်အရာ ဒူဘိုင်းအတွက်ဒေသခံများအဘို့။ ထို့အပြင်ယူအေအီးလူတိုင်းအတွက်တစ်သွက်တွေကတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကအတော်လေးထူးဆန်းပေမယ့်မြောက်မြားစွာလိင်တူချစ်သူအရက်ဆိုင်များနှင့်နိုက်ကလပ်ရှိရာဖြစ်နိုင်သည် အရှေ့ဥရောပ ပြည့်တန်ဆာပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသစ်ကိုဖောက်သည်ရှာပါ။ Are လေ့ လူအပေါင်းတို့သည်ယူအေအီးကျော်နိုင်ငံတကာအတွက်ဖွင့်လှစ်.
တစ်ခုကြည့်ဖူး အလုပ်လုပ်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ။ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာရှိတဲ့ options များအများကြီးရှိပါတယ်ပါ!
ကာတာနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ယူအေအီး, ဂျော်ဒန်
ကာတာနိုင်ငံခုနှစ်တွင်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နည်းလမ်းများတွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာဖော်ပြ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား ကာတာနိုင်ငံအသစ်တစ်ခုမြို့များအတွက်အဆောက်အဦစီမံကိန်းကိုတာဝန်ရှိသည်။ ထိုအရာအများကြီး employ ရည်ရွယ်ထား ကာတာနိုင်ငံပိုမိုကျွမ်းကျင်သူများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, 2020 ပွဲအတွက်ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုအမြတ်ထုတ်လျက်ရှိသည်နှင့်အကြားမှအထူးကြပ်မတ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြုံနေရ အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို၏ဂတိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကာတာမှရွှေ့မတိုင်မီသိရန်လိုအပ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။
သငျသညျအဘယ်သူအားမျှ legit ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လျှင်။ အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစီရင်ခံစာ, မာကျူရီနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နဲ့အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီမှတျတမျးတငျထား MENA, နီပေါကနေ 80 လုပ်သားများနှင့် ပတ်သက်. left သော အိႏၵိယ, နှင့်ဖိလစ်ပိုင် grounded နဲ့ကာတာနိုင်ငံအတွက်လကြာမရတဲ့။ ဒါကြောင့်သင်အမြဲကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရန်။
သို့သော်အစိုးရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီများပညတ်တော်မူ၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကာတာနိုင်ငံရဲ့စပွန်ဆာအစီအစဉ်ကိုကိုယ်စားပြုသော Kafala ဖွဲ့စည်းပုံမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ထိုန်ထမ်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုတည်းအလုပ်ရှင်ကပ်စေသည် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားရမှတ် exploit မှ။ နီပေါမှာတော့ 34 လူတွေမာကျူရီ MENA သူတို့ကို 1,500 ပေါင်ပျမ်းမျှမရှိစေရန်ခဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှအစီရင်ခံသည်ကို၎င်း, Kafala စနစ်ကသူတို့ကို exploit ကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်, အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူစကားပြောဖို့ကြိုးစား သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အကောင်းဆုံးကာတာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်အဆိုဒ်များအစိုးရဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် ဝန်ကြီးဌာနသည်ပိုင်ဆိုင်သောအလုပ် site ကို။ သူတို့ကဗဟိုဗီဇာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်လူသိများကိုအကောင်းဆုံးဆိုဒ်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ နှင့် သငျသညျဗီဇာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည် သငျသညျဆည်းပူးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျကြောငျးသားဗီဇာ, ဧည့်သည်ဗီဇာ, အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လည်းမရှိ Google ကထိုသို့သောသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေတာမှပြဿနာမျှ။ ကြောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဒေသခံတစ်ဦးသံရုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကကာတာနိုင်ငံဘို့အားလုံးနီးပါးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ယခုရှင်းပြဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်ရရှိနိုင်က်ဘ်ဆိုက်များကာတာနိုင်ငံအတွက် s ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါနိုင်ငံခြားသားသျောအတော်လေးလွယ်ကူသည်မဟုတ်အဖြစ်ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေခြင်း အခြားအလယ်တန်း - အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်။ အလုပ်လျှောက်လွှာတောင်းဆိုခံရဖို့များပါတယ်သောလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအတော်လေးကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်အားခနီးပါးရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးများထဲမှ.
ကောင်းပြီအတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံခြားလုပ်သားများ 15 မှာအဖြစ် 2019million ခံရဖို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ရေနံစီးပွားရေးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိအသစ်သောအခွင့်အလမ်း နိုင်ငံအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, နှောင်းပိုင်း 1930s အတွက်အဘယ်ကြောင့်အားပေးရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင်သူတို့ဆော်ဒီအာရေဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသော option ကိုရှိသည်။ ဒါကြောင့်, သူတို့ကနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားလုပ်သားအင်အားငှားရမ်းနေကြ။ အချို့သောထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေး, ပြည်တွင်းဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့သောအခြားကဏ္ဍများမှစုဆောင်းခဲ့ကြသော်လည်း။ ဆော်ဒီအာရပ်အမှုဆောင်အရာရှိကိုချစ်အဖြစ် မည်သည့်အချက်မှာအရပျမြားနှငျ့သှားဖို့အဆင်သင့်အတွက်အရာအားလုံးရှိသည်.
စံမွတ်စလင်နိုင်ငံတစ်ခု၌ရှိသကဲ့သို့။ အဆိုပါနိုင်ငံခြားသားများ၏နိုင်ငံသား၏အဆင့်ဆင့်ဆုံးဖြတ်သည် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား။ တဖန်သင်တို့ဥပမာ, အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ, အိန္ဒိယနှင့်အနောက်ပိုင်းလူအမျိုးမျိုးထံမှအလုပျသမား အဘယ်သူသည်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှပြောင်းရွှေ့ပြီ။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ပင်ဆော်ဒီမန်နေဂျာများကကျင်းပမရအမြင့်ဆုံးရာထူးဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ထိုအခါနိမ့်ရာထူးကကျင်းပကြသည် အာဖရိကန်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှသား.
အဆင်းရဲဆုံးတစ်ဦးနှင့်အများဆုံးဖြစ်လေ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက ကမ်ဘာပျေါတှငျဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောနိုင်ငံများ အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့။ သို့သော်ကြိုတင် Texaco ရေနံ (အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ) ကရေနံများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်။ အဆိုပါနိုင်ငံခြားအကူအညီနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ကျယ်ပြန့်ရေနံသိုက် exploit ဖို့လိုအပျခဲ့သညျ။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံခြားလုပ်အား၏နံပါတ်တစ်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့တိုးရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါ၏ရလဒ်အဖြစ် သည်အခြားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှအဓိကအားရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအစီအစဉ်များကိုကျွမ်းကျင်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလုပ်သားများ၏ရောက်လာအားပေးတယ်။ စိတ်၌ဤအတူပါဆုံးအလုပျသမားပါလက်စတိုင်းခဲ့ကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကအဲဂုတ္တုလူတို့သည်, ယီမင်နှင့်အခြားသူများကိုလက်ခံရရှိစတင်ရန် အာရပ်နိုင်ငံတွေကနေ.
ဆော်ဒီအာရေဗျ 2023 သည်အထိအချမ်းသာဆုံးအာရပ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါကကျွမ်းကျင်သူများအဘို့သေချာကောင်းတစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အဘို့ဖြစ်၏ပါပဲ။ သူတို့မှာရှိတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တွေအများကြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမရရှိနိုင်အလုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ဆော်ဒီအာရေဗျ၌, အဆိုပါဗီဇာဖြစ်စဉ်များကိုလည်းမရဒါကြောင့်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့အပြင်းထန်ဆုံး၏တဦးတည်းနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအများဆုံးရှုပ်ထွေးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဥရောပသို့မဟုတ်မှနိုင်ငံခြားသားများများအတွက် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု.
ဆော်ဒီအစိုးရစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကတက်ကြွစွာခရီးသွားလုပ်ငန်းစျေးကွက်ပါဘူး။ သူတို့ကလူဦးဒူဘိုင်းကြိုဆိုအမျိုးအစားမဟုတ်။ ဒါကြောင့်ထက်နည်း2ရက်သတ္တပတ်အတွက်ခရီးသွားဧည့်ဗီဇာရဖို့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ entry ကိုသို့ငြင်းဆန်၏သဘောထားကိုရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်အစ္စရေးတံဆိပ်ခေါင်းနှင့်အတူလူများအတွက်။ သင်တစ်ဦး updated နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူဤတိုင်းပြည်ထဲကနေလျှင်ဒါ။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်လျှောက်လွှာတောင်းဆိုခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးကိစ္စများတွင်။
အဲဒီမှာအလုပ်များအတွက်ထူးချွန်ဆုံးအကြံပေးချက်များတစ်ခုမှာ။ ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းထိပ်အောင်မြင်မှုလက်မှတ်ကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်အထောကျအကူဖွစျလိမျ့မညျ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခု။ ဥပမာအားဖြင့်ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်, ဇာတ်ကောင်လက်မှတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်လက်မှတ်များ။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်တက္ကသိုလ်ဒါမှမဟုတ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေ။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာ, တစ်ခုတည်းသောအရာကိုသင်ရလိမ့်မည်ဟု အလုပ်၏ CV ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဘယ်မှာလျှောက်လွှာနှင့်အတူ hit သိရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ, သငျသညျနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျင့်ကိုကျင့်လျှင်။ စုဆောင်းရေးသင်တို့နှင့်အတူအဆီသို့ဦးတည်လုပ်ကိုင်ဖို့ကအကြံပြုလိုတယ်ဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသင်သည်သင်၏ CV ကိုပြီးပြည့်စုံသောအောင်သုံးစွဲပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်အချက်မှာပျောက်ကွယ်ကြချင်တယ်။
ကောင်းပြီ, ယူအေအီးအတွက် (ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု), ယူအေအီးအစိုးရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအဘို့ဖြစ်၏။ နှင့်ဤတိုင်းပြည်ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အသစ်အလုပျသမားမြားကိုယူမှမင်္ဂလာရှိ၏။ ထိုမှတပါး, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနိုင်ငံခြားသားများ။ Are နေဆဲအခွန်လွတ်နေစဉ်အဲဒီမှာရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေ။ ထို့အပြင်အစိုးရ-related အလုပ်အကိုင်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ယူအေအီးနိုင်ငံသားများအရှက်ကွဲခြင်းရှိကြောင်းယုံကြည်ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အချို့သောပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအလုပ်အကိုင်များအတူလုပ်ကိုင်။ ဒေသခံအာရပ်အများစုဟာအစိုးရကစာချုပ်နှင့်စီမံကိန်းများကိုသို့မဟုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတွက်အလုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တိုင်းပြည်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလာသောအခါထိုမှတပါး, လူ့အဖွဲ့အစည်းကို။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာဖြစ်ကြောင်း အများကြီးပိုကောင်းနေရာပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌.
ယူအေအီးပင်စိတ်ကူးနိုင်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားသားတွေရှိတယ်ရွေ့လျား။ တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ပါဝင်သည်အလုပ်ရှာဖွေနေသူအနောက်ပိုင်းလူအမျိုးမျိုးထံမှလူဖြစ်ကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်လူဦးရေအတွက်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းမှကိုးတစ်အချိုးပေါ်မှာ။ ထိုမှတပါး, ယူအေအီးအစိုးရပညတျတရားကို set up။ ထိုတစ်ဦးလူဝင်မှုမှာအနည်းဆုံး 30 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကာလအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းတည်းခိုပြီးနောက်ယူအေအီးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, သင်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့ကြရပေမည်။ ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုတောင် တစ်ဦးယူအေအီးနိုင်ငံသားဖြစ်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းရ.
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေယူအေအီးစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာကျောင်းတစ်ထိပ်တန်းအောင်မြင်မှုယူအေအီးလက်မှတ်။ Will ကျိန်းသေသငျသညျသစ်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းများအတွက် bar ကိုမြင့်တက်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ တဖန်သင်တို့နိုင်ငံတကာကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ရှိပါက။ ဒါဟာကျိန်းသေလိမ့်မည် သင်ယူအေအီးအလုပ်အကိုင်များကိုတညျဆောကျကူညီ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်အဖြစ်ဂုဏ်သရေရှိရင်းမြစ်များမှဇာတ်ကောင်လက်မှတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်လက်မှတ်များကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အာရဗီကမ်ဘာပျေါတှငျအားသာချက်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, သင်ကအလုပ်ရလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့် CV စုံလင်သောအောင်ကိုဦးတည်လုပ်ကိုင်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်, ထိုစျေးကွက်ကသင်၏အတွေ့အကြုံကမရှိ, ဒါ။ အမြဲတမ်းအဘယ်သူမျှမအမှားတွေရှိပါတယ်သေချာပါစေ။ သတိရရမည်ဖြစ်သည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့ကိုအင်္ဂလိပ် CV ကိုအသုံးပွုနိုငျ.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခြားသောအရပ်ယော်ဒန်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတိုင်းပြည်ဘရိတ်မှတ်တမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကလူကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီး2မှာကြောင့်သန်း 2015 ကျော်ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တစ်ဦးနေအိမ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်မသာသူတို့ငှားရမ်းဒါပေမယ့်လည်းအခြားသူများကိုထောကျပံ့ပေးနေကြသည်။ ဂျော်ဒန်လူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 98% အာရပ်များမှာရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ကျန်ရှိ 2% တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများဖြစ်ကြသည်။ ယော်ဒန်မြစ်များတွင်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ။ ယော်ဒန်မြစ်၌အလုပျသမားအခွအေနေခက်ကြောင်းကိုတီဗီနှင့်သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းကြောင့် အဆိုပါ countr အတွက်အနိမ့်အရည်အချင်းပြည့်လုပ်သားအင်အား၏ရှေ့မှောက်တွင်y က။ ဥပမာ, "တစ်ဦးကစိန်ခေါ်မှု Market ကပိုမိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာ" အမည်ရအစီရင်ခံစာအတွက်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား။ ဒါကြောင့်, သငျသညျပွငျဆငျခံရဖို့ရှိသည်နှင့် ပိုပြီးထိရောက်မှုအလုပ်အကိုင်များရှာ။ မန်နေဂျာများသို့မဟုတ်ပင်အကြီးတန်းမန်နေဂျာများ။
ကျယ်ပြန့်သုတေသန၏ရလဒ်အဖြစ်စက်တင်ဘာလ 2016 ထွက်ဆောင်သွားကြ၏။ ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ယေဘူယျ။ လူတွေအများအပြားကြီးမားသောဒုက္ခသည်လူဦးရေကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပယော်ဒန်မြစ်ရဲ့အလွန့်အလွန်ရက်ရောသောအလှူငွေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အမျိုးသားရေးအလုပ်သမားဈေးကွက်အတွက်, သူတို့ကယင်း၏အလုပ်လုပ်သောလူဦးရေဖော်ပြထားပါပြီ။ အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သောအစီရင်ခံစာရည်ရွယ်ထား နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း။ အမျိုးသားဈေးကွက်ထဲမှာဂျော်ဒန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုတှငျ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးအလုပျသမားမြားအတှကျအဆင်ပြေကြောင်းသေချာစေရန်မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေကြိုးစားပါ။ ပြည်ပမှာအနေဖြင့်တဦးတည်းသာမဟုတ်ဘဲ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဒေသခံလုပ်သားအင်အားအပေါငျးတို့သမျိုးများအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ လည်း, ဘယ်လိုဂျော်ဒန်လုပ်သားများဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲဆီးရီးယားဒုက္ခသည်ပါဝင်ရန်။ ထိုဥရောပအဖွဲ့ဝင်များကမေးလျှင်မေးခွန်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်များမှအလုပ်သမားစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနိမ့်ဆုံး၏လျှောက်လွှာအားပေးပြီးမှကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးလေလံ၌ရှိ၏ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းများမသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ရဲ့အနေအထားကို့။ တစ်ယော်ဒန်မြစ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်, သင့်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ပထမဖြစ်ပါသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်လွှာလိုအပ် ယော်ဒန်မြစ်အတွက်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ရယူသုံးအတော်လေးလွယ်ကူသည်။
ကူဝိတ်မှာတော့နောက်ဆုံးနှစ်များတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားစပွန်ဆာစနစ်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ရလဒ်အတွက်နိုင်ငံခြားသားတွေအလုပ်ပါမစ်ရနိုင်ရန်အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးအလုပ်ရှင်တို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ရပါမည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစမတ်တပြင်လုံးကိုလည်းမရှိ ကလူအများကြီးအောင်မြင်သောအလုပ်ရှာဖွေသူဖြစ်လာရရန်ကြိုးစားs ကို။ သြဂုတ်လ 2008 အတွက်အဓိကပြောင်းလဲမှုအမတ်အဗ္ဗဒူလာအယ်လ် Roumi သူကူဝိတ်ရဲ့ kafeel နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားစပွန်ဆာစနစ်အားဖျက်သိမ်းဖို့ဥပဒေပွငျဆငျဖို့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ကနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာစီမံခန့်ခွဲ။ ထိုမှတပါး, ကြောင်းပြောင်းလဲမှုပြည်တော်ပြန်ကိုကူညီခဲ့သည်။ အစိုးရစနစ်သစ်တီထွင်နိုင်ရန်အတွက်စပွန်ဆာစနစ်အားပယ်ဖျက်ဆီသို့ဦးတည်ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ခဲ့ရည်ရွယ် ကြောင်းနိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့နေထိုင်ရာမစ်လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မှစ. , လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်အလုပ်သမားရေးရာသူတို့အမှုကိုယူပါ။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေဥပမာနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်။ သငျသညျကူဝိတ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ ထိုအသေချာသည်အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အပေါ်, ကူဝိတ်ရှိနှင့်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုဟာမတ်လှုပ်ရှားမှု seams ။ သငျသညျအလုပျမစတင်မီဒါပေမယ့်သင်ကအလုပ်ဗီဇာလိုအပ် မဆို Arabic အဘိဓါန်နိုင်ငံတွင်နဲ့တူ။ အလုပ်ပါမစ်နှင့်အလုပ်ဗီဇာကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုလုံးဝတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ခွင့် secure ရန်, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့သင့်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိခြင်းပြီးနောက်, လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိနေကြတယ် မည်သည့်အနီးဆုံးသံရုံးမှာအလုပ် entry ကိုဗီဇာရဖို့.
အဆိုပါကူဝိတ်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးကိုပုဂ္ဂလိကဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တဦးတည်းရှိပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဗဟိုဗီဇာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ငါသိ၏။ ဒါကလည်းဖြစ်ပါတယ် မသက်ဆိုင်နိုင်ငံခြားသားများမြျှောလငျ့နိုငျကွောငျးဗီဇာအမျိုးအစား၏။ ဥပမာ, ကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာသို့မဟုတ်ဧည့်ဗီဇာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကြောင်းပေါ်, သင်အမှန်တကယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဟုတ်ပါတယ်အလုပ်ဗီဇာစတာတွေပေါ်, အဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက် Bing မှသို့မဟုတ် Google ထိုသို့သောသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေတာရှိပါလိမ့်မယ်။ ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဆိုဒ်များအွန်လိုင်းစာရင်းနေကြသည်။ သူတို့ကိုသင်စာရိုက်ရှာတှေ့နိုငျ ကူဝိတ်အတွက်နိုင်ငံခြားသားတွေသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကူဝိတ်အတွက်ဂျော့ဘ်.
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဖြစ်ကူဝိတ်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလွတ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်အလုပ်ကိုရှာဖွေ, သင်ပထမဦးဆုံးမှာဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များ hit သငျ့သညျ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အခါ အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် - ငါတို့သည်အခြားအလယ်အလတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ get မှလွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကူဝိတ်အဆိုပါကူဝိတ်သံရုံးအတွက်အလုပ်လျှောက်လွှာတောင်းဆိုခံရဖို့များပါတယ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သည်ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် နိုင်ငံခြားသားများလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှသွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, စိတျထဲတှငျ, လူတွေအများကြီးအတူ။ အထူးသဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိ, ကျိန်းသေအလုပ်အတွက်အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။ တစ်ခုတည်းသောဖောက် အမှတ်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ စော်ဘွား၏အသစ်ဧည့်သည်။ အတော်ကြာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရပါမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းနိုင်ငံခြားအမှုဆောင်အရာရှိကြိုဆိုသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာဒူဘိုင်းလေဆိပ်, ဟိုတယ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါသည် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကို။ ဒူဘိုင်းတွင်ဤနေရာများအားလုံး၌တည်၏။ နယူးကလူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်လုပ်သားများမှတက်အိန္ဒိယအမှုဆောင်အရာရှိရန်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကျိန်းသေအပေါငျးတို့သကမ္ဘာလုံးကျော်ကနေအလုပျသမားအကြံပေး။ ကျိန်းသေ, ဒူဘိုင်းမြို့သို့သွားရောက်ရန်နှင့် ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်.
မဆိုတိုင်းပြည်ဤဆိုဒ်များရရှိနိုင်စေသည် နိုင်ငံခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း။ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြှနျုပျတို့သညျဤအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ကသတိပေးတယ်။
ပင်လယ်ကွေ့ Talent: ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် တိကျတဲ့အတွက်အလုပ်တင်ခြင်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းတွင်သောအရပ်တို့ကိုမ
Dubizzle အဘူဒါဘီများအတွက်ဧရာ site ကိုအဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်
Bayt စဉ်းစားသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာထိပ်တန်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များတဦးဖြစ်.
Monster ပင်လယ်ကွေ့ အင်တာနက်ခေတ်၏အရုဏ်ကတည်းကရှိပြီးသားထားပြီးဖြစ်သောနဂါးအလုပ်ရှာဖွေရေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ် စျေးကွက်အလုပ်အမှုဆောင်-Level အလုပ်အကိုင်များကောင်းမွန်သည်။
အလုပ်ရှာဖွေရေးဂျက် တစ်ဦးလူကြိုက်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအဘို့အလုပ်ရှာဖွေရေးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
တကယ်ပါပဲ ယူအေအီးနှင့်အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အ site ကိုဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
4 ကောင်းမွန်သော Learn သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ဟန်ရှိသော်လည်းအခြားကဏ္ဍများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိပါတယ်။
Laimoon အဖွင့်ကိုတိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေ aggregation အလုပ်လူသိများ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်စမတ်လမ်းနှင့်အင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်ရှိသည်မမေ့မလြော့ပါပါ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , သင်ကြားရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်အံ့သောငှါသူတို့အဘို့, သတိပေးတယ်။ သူတို့က may ကျိန်းသေအဆိုပါစမတ်နှင့်အလွယ်ကူဆုံး option ကိုရှေးခယျြ။ သငျသညျအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာလျှင်၏သင်တန်း, Speaking, ဒါမှမဟုတ်ရေးသားခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့ဆိုဒ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီကတဆင့် browse ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများဖြစ်ပါသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် ယူအေအီး၌ဆုံးမဩဝါဒဘို့သူတို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များကွိုးစားနိုငျဘဲ,
စုစုပေါင်း ESL ပြည်ပမှာဆုံးမဩဝါဒပေးစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့တခုအလွန်အမင်းအလုပ်များ interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ESL ကဖီး ကမ္ဘာတဝှမ်းကနေအကောင်းဆုံးအလုပ်အဖွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Testall ကြီးမားတဲ့သင်ကြားမှုအလုပ်အကိုင်များ aggregates ကြောင့် site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ခြေရာများရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး ရရှိနိုင်အကြီးဆုံး ESL သင်ကြားမှုရှာဖွေစုဆောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့ ဘဏ္ဍာရေးဂျော့ဘ်ဒီမှာအချို့ပြည်ပဖြစ်ကြပြီး ကျွမ်းကျင်သူများယောဘသည် Portal;
eFinancialCareers web ပေါ်မှာပေမယ့်သော်လည်းမရရှိနိုင်ဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အကြိုက်ဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်, သူတို့ကကာတာနိုင်ငံအဘို့ဤမျှလောက်မရရှိနိုင်မဟုတ်
Oversea ဂျော့ဘ် ယခုခဏမရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်း site တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီဆိုက်များပေါ်မှာတင်နှင့်အခြားဆိုက်များကိုအကြားသိသိသာသာထပ်တူဖြစ်ရှိပုံရသည်။
LinkedIn တို့ လယ်ပြင်၌ရှိသောအဆောက်အဦးအဆက်အသွယ်များအတွက်ကြီးမားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုသယံဇာတအဖြစ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၏တည်နေရာဖြစ်ပါသည်
အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အထူးသဖြင့်ယူအေအီးနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာ။ အမြဲတမ်းကတခြားအလယ်အလတ်အရှေ့ပိုင်းဒေသများထက် ပို. နယ်ပယ်များတွင်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့ကမ်းလှမ်းကောင်းသောအလုပ်ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုး သူတို့ပိုပြီးစီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှာဖွေနေကြောင့်။ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာ, ပြည်ပမှာလုပ်သားများလိုအပ်အချို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မည်သည့်အလုပ်လျှောက်လွှာတောင်းဆိုခံရဖို့များပါတယ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများနေသောခေါင်းစဉ်:
အထင်ကရနေရာများ - အထောက်အထား၏သက်သေပြချက် (Aditional တဦးတည်း)
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏2အရောင်မိတ္တူ
POA - Adress ၏သက်သေပြချက်
ဒါကြောင့်, သင်မြင်သည်အတိုင်း, အခွင့်အလမ်းများကိုသင်တို့အဘို့ရှိပါတယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲပြည်ပမှာနေတဲ့အသက်တာသစ်ကိုစတင်ပါဖို့လုံလောက်တဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ထက်ပို3သန်းပြည်တော်ပြန်ရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, သင်လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်၏အဇာတိမြေအတွက်ခွဲထားခဲ့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲသင့် application များအတွက်စောင့်ဆိုင်း။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR အဖွဲ့နှင့်အတူသင်၏ CV မှတ်ပုံတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေစုဆောင်းသေချာဘို့သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည် !.